गोर्खा स्मारक प्रदेशकै गौरव | eAdarsha.com
पोखरा । युद्धभूमिमा कैयौं वीरगोर्खाली सहिद भएका छन् । विश्वयुद्धदेखि विभिन्न देशका युद्धभूमिमा ज्यानको बाजी थापेर लडेकामध्ये ६० हजारभन्दा बढी वीरगोर्खालीको ज्यान गएको छ । वीरताका साथ लडेका उनीहरुको स्मृतिमा नेपालमा गोर्खा स्मारक निर्माणाधीन छ । त्यो अन्यत्र नभएर गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखराको सीमाना स्याङ्जाको फेदीखोला–१, साल्डेडाँडामा छ ।
गोर्खाहरूको मोक्षको लागि निर्मित गोर्खा समाधि आफैंमा मेघा प्रोजेक्ट हो । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत गोर्खा समाधिसहित गोर्खा म्युजियम, गोर्खा टावर, जातीय नमुना घर र छुकछुके रेल गरी ५ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । हाल निर्माण अन्तिममा रहेको गोर्खा समाधिका लागि गोर्खा हेरिटेज बेलायतको पहलमा संकलित २६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको गोर्खा स्मारक ट्रस्टले जनाएको छ ।
यसको शिलान्यास २०७० सालमा भएको हो । त्यसयता ४ वर्षसम्म गोर्खा भूपूहरुको प्रयासमा संकलित २० करोड रुपैयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरिएको थियो । आव २०७४/५५ मा सहरी विकास मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँ दियो । गजेन्द्र निर्माण कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण थालेकोमा सोको काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै सो डाँडामा आवश्यक पानी लिफ्टिङ गरी लगिएको छ । साल्मे पधेँरो मुहानबाट पानी तान्न ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमध्ये संघीय सरकारले २६ लाख, प्रदेश सरकारले ३५ लाख र बाँकी गोर्खा भूपूले संकलन गरे । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालले खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गरेका थिए । त्यहाँ गोर्खा स्मारक ट्रस्टको कार्यालय भवन निर्माणमा अनुमानित लागत १ करोड १४ लाख रहेकोमा प्रदेश सरकारले २० लाख दिएको छ । भवन निर्माण अधुरो छ । संरचना पूरा गर्न झण्डै १ करोड आवश्यक पर्ने गोर्खा स्मारक ट्रस्टका सहसचिव जंगबहादुर गुरुङ बताउँछन् ।
दिवंगत गोर्खाहरुको स्मृतिमा गोर्खा भूपू संगठन (गेसो) का संस्थापक अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङको पहलमा २०७० सालमा साल्मेडाँमा संयुक्त काजक्रिया भएको थियो । गोर्खा भर्तिमा समावेश भएका २१ नेपालका जातिको मोक्षको लागि आ–आफ्नो रीतिअनुरुप सामूहिक काजक्रिया भएको हो । साथै त्यसै दिन हास्यकलाकार महजोडी मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले गोर्खा स्मारकको शिलान्यास गरेका थिए । पदमबहादुरकै पालामा गेसोले नै गोर्खा स्मारक ट्रस्ट खोलेको हो । २०७६ देखि यसको नेतृत्वको जिम्मा डब्लुटिओ जंगबहादुर गुरुङलाई सुम्पिएको छ । उनले प्रदेशको गौरव रहेको हुँदा गण्डकी सरकारले समेत यसको अपनत्व लिनुपर्ने बताए ।
गोरर्खा स्मारकमा समाधिका लागि पटक पटक गरी हालसम्म २६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भइसकेको छ ।
कुल ३० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ठाउँमा गोर्खा समाधिका लागि आवश्यक संरचना अन्तिम चरणमा पुगेका हुन् । जसमा समाधिस्थलसहित भिजिटर अफिस, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ट्वाइलेट, एम्पिथियटर, पानीको फोहोरा लागि आवश्यक संरचना निर्माण भएका हुन् । तिनीहरुको फिनिसिङ हुन बाँकी रहेको प्राविधिक सल्लाहकार इ.किसानसिंह गुरुङले बताए । गोर्खा स्मारक ट्रष्टको कार्यालयको लागि आवश्यक बजेट आए अर्को वर्षसम्म सञ्चालन हुन सक्ने अनुमान रहेको ट्रष्टका सचिव डा. चन्द्रबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । समाधिपछि अर्को फेजका विभिन्न संरचना निर्माण हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।
सन् १८१५ देखि हालसम्म ब्रिटिस नेपाल सम्बन्धको दुई शताब्दीपछि गोर्खाका नाउँबाट नेपाली युवाहरू विश्वका विभिन्न युद्धभूमिहरूमा गएर युद्ध लडे । प्रथम विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१८) र द्वितीय विश्वयुद्ध (सन् १९३९–४५) र सयौं क्षेत्रीय युद्धहरूमा गोर्खाहरू संलग्न भए । दुवै विश्वयुद्धमा गोर्खाहरू अफ्रिकन तथा युरोपियन युद्धमा समेत सामेल भएका थिए । ब्रिटिस अभिलेखअनुसार हालसम्म ६० हजारभन्दा बढी गोर्खाहरुले आफ्नो जीवनको आहूति दिएका छन् ।
गोर्खा स्मारकलाई प्रदेश सरकारले उच्च महत्व दिएको छ । शनिबार प्रदेशका प्रमुख सचिव, सचिव, गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति सम्मिलित टोलीले गोर्खा स्मारकको अवलोकन गरेको हो । टोलीमा गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङ, प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव इन्दु घिमिरे, अर्थ मन्त्रालय सचिव रमेशकुमार केसी, भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सचिव सवनम शिवाकोटी (अर्याल), वन वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा. महेश्वर ढकाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव बलसागर गिरी लगायतको उपस्थिति थियो । उनीहरुले यो गण्डकी प्रदेशकै गौरव रहेको उल्लेख गर्दै निर्माण पूरा गर्न आफूहरुले मन्त्रालयबाट आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । पोखराबाट नजिकै रहेकोले यो क्षेत्रले भोलिका दिनमा पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने उनीहरुको भनाइ छ ।